केही साइट निर्माताहरू दोहराव रूपमा, एक प्रक्रिया जस्तै मा लगे। सामग्री बस अन्य स्रोतहरू प्रतिलिपि गरिएको छ, र आफ्नो वेबसाइटमा सम्मिलित छ। पहिलो नजर मा, प्रक्रिया निश्चित लाभ, विशेष, लेखन लेख संग सम्बन्धित लागत को पूर्ण अभाव प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, एक यस्तो दृष्टिकोण साइट भर्नु गर्ने अद्वितीय जानकारी साइटहरु रुचि पर्यटकहरू पूर्ण हानि गर्न सक्छ। समावेश कि दोहराव, सामग्री, बारम्बार अन्य पोर्टलमा बारम्बार जीवनको सरलता बावजुद खोज इन्जिन र्याङ्किङ्ग मा स्थान को हानि हुन सक्छ। परियोजना को प्रवृत्ति साहित्यिक चोरी पाठ विरुद्ध लड्न सक्रिय छन् कि फिल्टर को लागि एक हिट साबित भयो।
को आगंतुकों को हानि सामग्री किन प्रतिलिपि गर्दा?
आफ्नो साइट स्रोत को अन्य प्रतिलिपि सामग्री राखिने भने, सिंहको साइट आगन्तुकहरूलाई को शेयर बस परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भुक्तानी विशेष ध्यान पाठ सामाग्री आज इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बीच प्रवृत्ति के छ। लाभ केही जानकारी मूल्य, originality द्वारा विशेषता छ र कुनै analogues छ कि प्रकाशनहरू गरिन्थ्यो। वेबसाइट आगन्तुक सामाग्री मा रुचि हुन सक्छ भने, उहाँले मात्र परियोजनामा समय समयमा फर्कन हुनेछ, तर आफ्नो मित्र यो सिफारिस हुनेछ। मुख प्रभाव सिद्धान्त को शब्द यहाँ। जो साहित्यिक चोरी को पृष्ठ मा स्थानहरूलाई परियोजना को विश्वसनीयता, कुनै चासो र धेरै छिटो भूल।
के साहित्यिक चोरी को प्रयोग मा रुझान देखि निम्नानुसार?
साइटमा नक्कली सामग्री मात्र होइन प्रतिलिपि मा लगी भएको छ जो, तर पनि स्रोत को समस्या भनेर अप लगे एक नम्बर ल्याउँछ पोर्टल, को मालिक समस्या प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। समस्या खोज इन्जिन विस्तार पार्टी को चोरी बाहिर छ, जो को मुद्दा बुझ्न कुनै हतारमा छन् कि छ बौद्धिक सम्पत्ति। योजना अनुसार समान र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्। यो दुई सत्य सफल पदोन्नति को गठन गर्न जान्छ। यो मात्र विदेशी साइटहरूबाट सामाग्री प्रतिलिपि गर्न अस्वीकार्य छ, यो यसलाई आफ्नो परियोजना मा रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण छ। स्रोत पृष्ठ पूर्ण परियोजना विषयको मिल्ने, एक अद्वितीय प्रतिलिपि अधिकार सामाग्री छ र यसको आवश्यकता आगंतुकों पूरा यदि सान्दर्भिक यातायात buildup हुन्छ। सुरक्षा प्रतिलिपि पाठ सामाग्री को जरुरी स्थापना छलफल।
स्थिति को पूर्ण हानि - दोहराव हुन सक्छ जो घटना, को छ। इन्टरनेटमा कुनै analogues छ जो सामग्री, परियोजना प्रमुख माग मा खोज इन्जिन परिणाम मा एक राम्रो स्थिति प्रदान गर्दछ। परियोजना को पदोन्नति प्रयास, समय र वित्त को एक जबरदस्त राशि आवश्यक छ। यो परियोजना को हानि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मापदण्ड छ। खोज इन्जिन गर्दा नै सामाग्री पाहुना कि साइटहरु आइपर्दा बस क्षेत्रको भौतिक पछि प्रकाशित भएको थियो जुन चोरी को अपराधियों दण्ड निर्धारण र।
खोज इन्जिन सामग्री मूल्याङ्कन: फिल्टर
जानकारी सामाग्री को दोहराव अभ्यास गर्ने परियोजनाहरु, मालिकको, खोज इन्जिन केही प्रतिबंध प्रयोग गर्नुहोस्। स्रोतहरूमा काम निकै आफ्नो अवसर curtailing, को परियोजनाहरूको काम जटिल जो, फिल्टर स्ट्याक। सक्रिय हुँदा फिल्टर क्षेत्र भाग मा खोज इन्जिन को जारी भाग वा सबै सार्वजनिक दृश्यबाट लुकेका बन्न सक्छ। भविष्यमा विशाल कठिनाइ संग फिल्टर कार्य बाट पनि एक क्रमिक निस्कनुहोस्। antiplagiat-संयन्त्र परे जा अक्सर व्यवसायीक को र अतिरिक्त बिना हस्तक्षेप आवश्यक सामाग्री लागत। यो परियोजना को पूर्ण कार्यक्षमता पुनर्स्थापना पछि, आफ्नो स्थिति एकदम पर्न सक्छ, र पदोन्नति सुरुदेखि सुरु हुनेछ भने गर्नुपर्छ।
दोहराव र सानातिना समस्याहरूको को तंत्र
जस्तै Google र "Yandex", सजिलै त्यहाँ दोहराव रूपमा प्रत्येक व्यक्ति परियोजना को रूपरेखा मा यस्तो घटना भएको छ कि छैन भनेर निर्धारण सहित खोज इन्जिन। नेटवर्क मा धेरै पटक दोहोर्याइएको छ सामग्री "लावारिस स्रोत" श्रेणी बुझाउँछ। उहाँले खोज इन्जिन को स्मृति मा कुनै ठाउँ छ। खोज इन्जिन को तंत्र लेबल "चोरी" को परियोजना को जानकारी घटक मा हङ अन्य स्रोतहरू सामग्री प्रतिलिपि गर्न आवश्यक छैन। गैर-अद्वितीय सामग्री सम्बन्धित सामाग्री को श्रेणी, बारम्बार साइट भित्र बारम्बार छ। अक्सर, अनलाइन स्टोर द्वारा सामना यो समस्या, तिनीहरूलाई समान भर्चुअल प्रतियोगिहरु उत्पादन र वर्णन को Windows मा राखिनेछ। नक्कली सामग्री हुन सक्छ:
एक विशेष खोजशब्द को लागि प्रश्न लागि खोज इन्जिन को चयन मा पृष्ठ बेवास्ता।
अवसर को कमी यसलाई बुझाउँछ जो सन्दर्भ पृष्ठ वजन बढाउन।
संभावना कमी परियोजना अन्य पृष्ठहरू को PageRank वृद्धि गर्न।
सबैभन्दा खराब-मामला परिदृश्य - एक खोज इन्जिन यसलाई गैर-अद्वितीय सामग्रीको बारेमा 50% लगािन्छ घटनाको साइट को कुल हानि।
केही चाल optimizers SEO
सामग्री निषेध ठाउँ लिन सक्छ अर्को साइटबाट प्रतिलिपि सामाग्री, खोज इन्जिन को "spiders" परियोजना दुई वा बढी समान पृष्ठहरू पत्ता छ भने चोरी श्रेणी को लागि एक पृष्ठ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ जब मात्र। तपाईं manipulations एक श्रृंखला पकड भने हुन सक्छ, फिल्टर प्रयोग को अप्रिय परिणाम जोगिन। सुरुमा, तपाईं एक पृष्ठ टेम्पलेट शब्दहरू संख्या गणना गर्न आवश्यक - भरने लागि बाहेक सबै प्रतीक। समस्या टेम्प्लेटमा शब्दहरूको नम्बर परिवर्तन गर्न छ। यो खोज इन्जिन एक अद्वितीय पृष्ठ रूपमा बुझ्ने हुनेछ भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व हुनेछ। कृपया याद गर्नुहोस् कि शीर्षक बारम्बार छैन पर्छ भनेर, समान नामका दुई पृष्ठ पहिले नै सम्भावित डुप्लिकेट को श्रेणी मा छन्। एउटा विकल्प, यो ग्राफिक एनालग केही पाठ ब्लक तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन विचार गर्न आवश्यक छ।
तोडफोड सामग्री कसरी पत्ता लगाउन?
खराब सामग्री पत्ता लगाउन दुई साधारण सेवा प्रयोग गर्न सामान्य छ:
Copyscape। यो बहुमुखी आवेदन तपाईं जाँच पृष्ठ र अन्य साइटमा स्थित छन् सामाग्री फेला पार्न अनुमति दिन्छ।
Webconfs। यो सफ्टवेयर तुलना पृष्ठहरूमा यस्तै सामग्रीको प्रतिशत निर्धारण गर्न डिजाइन गरिएको छ।
तपाईं कार्यक्रम-antiplagiat विश्लेषण गर्न जानकारी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अद्वितीय सामग्री वा छैन, यो मिनेट को एक मामला मा निर्धारण गर्छ।
हामी विशेष खोज इन्जिन "Yandex" विचार भने, हामी «र rd =0को कुरा गर्न सक्नुहुन्छ" को प्यारामिटर को प्रतिहरू खोजी गर्न लागू गरिएको छ। खोज स्ट्रिङ धारणा द्वारा प्रतिलिपि गरिएको छ कि पाठ को एक खण्ड पाइन्छ, र सिस्टम जवाफ प्रदान गर्दछ। «URL» affixed कोड «र rd =0पछि, गलत पुनरावृत्ति पत्ता लगाउन क्रममा"। खोज प्रक्रिया बारम्बार बाहिर छ।
म भने एक साइट साहित्यिक चोरी पाइन्छ के गर्नुपर्छ?
सामग्री पहुँच सुरुमा बन्द भएको छैन भने गरिएको, यो तुरुन्तै डुप्लिकेट सामना गर्न सुरु गर्न आवश्यक छ। एउटा विकल्प, तपाईँ आफ्नो स्रोत राख्न अनुरोध गर्न प्रतिलिपि जानकारी उपस्थिति साइट को सम्पादक सम्पर्क र ध्यान दिनुहोस् गर्न आवश्यक छ। पुनरावेदनका इच्छित प्रभाव ल्याउन गर्दैन भने, तपाईँले "Yandex" को विशेष सेवा गर्न गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। गैर-अद्वितीय सामाग्री प्रयोग गरेर सम्बन्धित उच्च जोखिम नामेट जो निगरानी आफ्नो साइट अद्वितीय सामग्री प्रणालीबद्ध बाहिर गर्नुपर्छ। देखाइएको, गैर-अद्वितीय सामग्री, खोज इन्जिन द्वारा प्रणालीबद्ध बाहिर छ, जो फिल्टरिङ, समस्या हिज्जे सकेन।
समस्या भन्दा रोक्न निर्मूल गर्न सजिलो छ
अक्सर केही आधारभूत तरिका सीमित सामग्री पहुँच लडाई fraudsters गर्न विकल्प ठूलो संख्या बीच:
नक्कली पृष्ठ को शारीरिक उन्मूलन। एकदम अक्सर एक प्रविष्टि वा पाठ टिप्पणी एक प्राविधिक विफलता को एक परिणाम वा कारण मानव लापरवाही गर्न धेरै पटक वेबसाइटमा देखा पर्न सक्छ भनेर हुन्छ। बस पुनरावृत्ति हटाउन।
साइटको प्रत्येक पृष्ठमा संकेत गर्नुपर्छ ट्याग «rel =" प्रमाणिक "»। यो पृष्ठ को सङ्कल्प गर्न संकेत हुनेछ। तपाईं पूरा गर्न नै सामाग्री धेरै पृष्ठ सम्बन्ध गाँसिसकेको आवश्यक जब यो विकल्प परिस्थितिमा आदर्श छ।
धेरै लोकप्रिय स्वतः पृष्ठ स्रोत सामाग्री आगन्तुकहरूलाई पुनर्निर्देशित गर्न एक "301 पुन: निर्देशन" प्रयोग हो।
सामग्री प्रतिबन्ध पूर्ण संग उपसर्ग «/index.html» पृष्ठहरूमा भित्र परियोजना को अभाव द्वारा complemented छ।
तपाईं सामग्री मा बचत गर्न आवश्यक? पुस्तक rewriting पाठ
निःशुल्क वेबसाइट संवर्धन: शुरुआती सुझाव
Copywriting आदेश हुनुपर्छ? खोजी व्यावसायिक सल्लाह
वेबसाइट लागि अद्वितीय सामग्री
कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा iTunes स्थापना गर्न? स्थापना र निर्देश अपग्रेड
बच्चाहरु मा टिकट: लक्षण र उपचार
को मेरुदण्ड को रोगहरु। spondylosis deformans
को ओरेनबर्ग क्षेत्र को जनसंख्या: संख्या र जातीय संरचना
दावी: शब्द को lexical अर्थ छ के